Doorashada Itoobiya: Abiy oo wajahaya doorashadii ugu horreysay xilli ay xaaladda dalkiisa cakirantahay | Saxil News Network
June 21, 2021 - Written by Baas Rashiid
Dalka Itoobiya waxaa saaka loo dareeray goobaha codbixinta, iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha iyo dagaalka dhiigga ku daatay ee waqooyiga gobolka Tigray.
Doorashadan oo dib u dhac ku timid markii hore ayaa ah midii ugu horeysay ee dhacda tan iyo markii Ra’iisul wasaare Abiy Axmed xukunka qabtay 2018-kii.
Balse codbixinta ayaa dib loo dhigay gobolka Tigray, halkaas oo ay ku dagaalamayeen ciidanka dowladda iyo jabhadda TPLF tan iyo bishii Nofembar.
Amni darrada iyo dhibaatooyinka ayaa ku dhuftay qeybaha kale ee dalka , marka guud ahaan ma jiri doonto wax codeyn ah ilaa shan meelood.
Colaada Tigray ayaa dhalisay dhibaato bini’aadanimo, iyadoo 350,000 oo qof ay ku noolyihiin xaalado macluul, sida lagu sheegay qiimeyn dhawaan la sameeyay.
Tirada guud ee 547 goobood ee deegaan doorashada ee baarlamaanka, ayaa maanta oo Isniin ah waxaan laga codeynin 102 goobood, iyadoo loo aaneeyey amni darro iyo wax is daba marin.
Deegaanka Tigreega 38 deegaan doorasho ayaaney ka dhaceyn doorasho, maadaama halkaasi haatan ay ka socdaan dagaallo.
Doorashadan waa tii uggu horeysay tan iyo intii uu xukunka qabtey ra’iisal wasaare Abiy Axmd sanadkii 2018-kii.
Doorashada guud, tii ugu horreysay tan iyo 2015-kii, waxaa markii hore loo qorsheeyay Ogosto 2020 laakiin dib ayaa loo dhigay coronavirus awgiis.
Jadwalka hore ee doorashada, natiijooyinka hordhaca ah ee ka imanaya degaannada waa in lagu dhawaaqo shan maalmood gudahood , halka natiijooyinka ugu dambeeya ee la coddeeyey lagu dhawaaqo 23 maalmood gudahood.
Maxay muhiim u yihiin doorashooyinkaan?
Mr Abiy wuxuu xukunka qabtay 2018-kii asaga oo magacaabay isbahaysigii markaas talada hayay laakiin waligiis ma uusan wajihin doorasho.
Doorashadii ugu dambeysay, xisbiga talada haya ee Itoobiya ee EPRDF iyo xulafadiisa ayaa ku guuleystay dhamaan kuraasta, balse Mr Abiy ayaa kala diray isbahaysiga wuxuuna abuuray xisbi cusub Xisbiga Barwaaqada isagoo isku dayaya inuu yareeyo kala qeybsanaanta qowmiyadaha. Hase yeeshee, kooxda TPLF kuma aysan biirin.
Mr Abiy ayaa sii hayn doona xilkiisa hadii xisbigu ku guuleysto aqlabiyada 547 kursi ee golaha qaran. Wuxuu yiri doorashooyinka ayaa noqon doona “isku daygii ugu horreeyay ee qaran ee doorasho xor iyo xalaal ah”.
Xamaasaddiisa isbedel-doonka ayaa u horseeday inuu ku guuleysta Abaalmarinta Nabadda ee Nobel-ka 2019, balse sannad uun ka dib, wuxuu hawlgal milatari ka bilaabay dalkiisa. Wuxuu ciidamo geeyay Tigray si ay meesha uga saaraan kooxda TPLF oo ah xisbiga xukuma gobolka ka dib markay qabsadeen saldhigyo militari taas oo uu Mr Abiy u arkaayay isku day lagu ridayo.
Waxay dhalisay isku dhac ay ku dhinteen kumanaan qof waxayna u horseedday gaajo baahsan iyo warbixinno ku saabsan macluul ka dhacday gobolka.
In ka badan 40 xisbi ayaa soo saaray musharixiin kala duwan, sida uu sheegay guddiga doorashooyinka qaranka ee Itoobiya, balse badankood waa xisbiyo ka jira gobolada.
Xisbiyada mucaaradka ayaa ka cawday in cadaadis dowladeed oo ka dhan ah saraakiishooda uu carqaladeeyay qorshayaashooda ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyinka.
Markii uu dhiibanayay codkiisa, hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka ugu weyn, Citizens-ka Itoobiya ee Cadaalada Bulshada, wuxuu sheegay inuu rajeynayo in natiijada ay ka turjumeyso rabitaanka shacabka.
“Tani macnaheedu maahan inaysan jiri doonin dhibaatooyin. Balse dhibaatooyinka ma noqon doonaan kuwo muhiim ah oo ku saabsan in la rogo ama la muujiyo waxa ay dadweynuhu dhab ahaan u codeeyeen,” ayuu u sheegay saxaafadda ku sugnayd goobta doorashada.
Gobollada muhiimka ah qaarkood, sida Oromiya, xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay inay qaadacayan doorashada.
Jabhadda Xoreynta Oromada ayaa isaga baxday bishii Maarso, iyagoo ku andacoonaya inay dowladda cabsi gelisay.
Kooxda TPLF ayaa loo aqoonsaday urur argagixiso. Qaar ka mid ah hogaamiyayaasheeda ayaa la xiray, halka qaar kalena ay ku raad joogaan ama ay sii wadaan inay dagaal dhuumaalaysi ah ku qaadaan Tigray.
Aragtida ay qabeen dadka deegaanka uu kasoo jeedo Abiy Ahmed
Catherine Byaruhanga, BBC News, tuulada Beshasha ee dalka Itoobiya
Dooxada udhaxeysa buuraha ee ku taala tuulada Beshasha ee ah deegaanka uu ka soo jeeda ra’iisal wasaaraha ayaa loo rogay xarun codbixin ah.
Halkani waa halka uu ku dhashay kuna koray Raysal wasaare Abiy Ahmed aadna uu caan uga yahay. Waxa uu ku soo bandhigayaa boorar olole ah.
Balse waxaa halkan jooga laba musharrax oo la tartamaya ra’iisul wasaaraha waxayna ii sheegeen in mas’uuliyiinta maxalliga ahi ay dhibaateeyeen taageerayaashooda oo ay ku adkeeyeen inay ololeeyaan. Haddana waxay ka fogaanayan inay dhaleeceynayaan ra’iisul wasaaraha.
Qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu waa weyn dalka ayaa qaadacay doorashadan iyagoo ku sababeeyay cabsi gelinta gobolka ka jirta. Qaar ka mid ah kuwa sida weyn uga soo horjeeday Mr Abiy ayaa ku jira xabsi lagu eedeeyay inay isku dayeen inay qalalaasa geliyaan dalka.
Codbixintu ma noqon doontaa mid xor ah oo xalaal ah?
In kasta oo lagu soo biiriyay tartan qaran, doorashooyinka laguma qaban doono ilaa shan meelood meel ka mid ah 547-ka deegaan doorasho ee dalka, oo ay ku jiraan dhammaan 38 kursi ee Tigray iyo 64 kale oo ku baahsan Itoobiya.
Inta badan codadka dib udhacay waxaa loo qorsheeyay 6da Sebtember inkasta oo aan wali waqti loo cayimin gobolka Tigray.
Waxaa jira kormeerayaal ka socda Midowga Afrika iyo sidoo kale kooxo badan oo Itoobiyaan ah balse Midowga Yurub ayaa sheegay inaysan doorashadan u diri doonan wax kormeerayaal ah . Bishii Maajo, Midowga Yurub wuxuu ku eedeeyay Itoobiya inay ku fashilantay dammaanad qaadka madax-bannaanida howlaheeda.
Itoobiya ayaa ka jawaabtay iyada oo sheegtay in kormeerayaasha dibada aysan “muhiim ahayn lagana maarma in la caddeeyo kalsoonida lagu qabo doorashada”.
Mr Abiy wuxuu meesha ka saaray walaaca ay beesha caalamku ka qabto arrimaha doorashooyinka wuxuuna ku adkeystay in doorashadu ay u dhici doonto si xor iyo xalaal ah.
“Markay adduunka oo dhan dhahaan waan dagaalami doonaa maalinta doorashada, taa badalkeeda waxaan bari doonaa cashar,” ayuu ku yiri taageerayaashiisa isbuucii hore.